Shirkada isgaarsiinta Golis oo dhaqaale dhan $250,000 ugu deeqday gurmadka abaaraha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandShirkada isgaarsiinta Golis oo dhaqaale dhan $250,000 ugu deeqday gurmadka abaaraha Puntland
Shirkada isgaarsiinta Golis oo dhaqaale dhan $250,000 ugu deeqday gurmadka abaaraha Puntland
February 7, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Shirkada isgaarsiinta Golis oo dhaqaale dhan $250,000 ugu deeqday gurmadka abaaraha Puntland. [Xuquuqda Sawirka: Puntland Post]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Shirkada isgaarsiinta Golis ayaa shalay oo Isniin ahayd dhaqaale dhan $250,000 ugu deeqday abaarta daran ee ka jirta gobolada Puntland.
Dhaqaalaha ayaa maamulka shirkada Golis waxa ay ku wareejiyeen guddiga culimada ee gurmadka aabaraha Puntland.
Guddiga culimada ee gurmadka abaaraha Puntland ayaa shirkada Golis uga mahadceshay dhaqaalaha ay ugu deeqeen wax ka qabashada abaaraha.
Munaasabada dhaqaale wareejinta oo ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka shirkada Golis oo ay kamid ahaayeen mareeyaha Golis Sciid Aadan Gaws iyo guddoomiye ku xigeenka guddiga boorka Luqmaan Maxamuud Axmed. Dhanka culimada waxaa kamid ahaa Shiikh Daahir Aw-cabdi, Shiikh Axmed Daahir Xasan Xuseen, Shiikh Axmed Yuusuf Daad iyo Shiikh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka culimada ee abaaraha Puntland.
Ku dhawaad 1.5 milyan oo reer guuraa ah ayay saameysay abaarta ku dhufatay gobolada Puntland.
Shirkada Golis waa shirkada isgaarsineed ee ugu weyn Puntland, qiyaastii 3 milyan dad ka badan ayaa isticmaala adeegyada shirkada.
November 21, 2016 Haayada GIZ oo beenisay in la musuq-maasuqay mashruuca dib loogu dayactirayo wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo
Ruushka: Iran maahan dowlad argagixiso
Faroole oo ka tanaasulay tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya
Deg Deg: Dhawaaqa madaafiicda oo caawa laga maqlayo gudaha Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaafiic waa weyn ayaa caawa dhawaaqooda laga maqlayaa magaala Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Sida aya ilo-wareedyo ku sugan Muqdisho u sheegeen warsidaha Puntland Mirror dhawaaqa madaafiicda ayaa laga maqlayaa meelo kala duwan oo [...]
Qardho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland in ay si ka baxaan dhammaan deegaanada gobolada Sool iyo Sanaag ee ay qabsadeen. Isaga oo ka hadlayay munaasibad lagu soo xirayay [...]